सबै ग्रह तथा ताराहरूको आकार गोलो नै किन हुन्छ ? ~ विज्ञान संसार
सबै ग्रह तथा ताराहरूको आकार गोलो नै किन हुन्छ ?
Posted by Om Bhandari On 12:22 AM
विज्ञानको नियम अनुसार ब्रम्हाण्डका सबै भौतिक पदार्थले अधिकतम स्थिरताको लागि न्युनतम ऊर्जाको स्थिति प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छ । कुनै पदार्थको निश्चित आयतनको सतहको क्षेत्रफल अन्य आकारमा भन्दा गोलो आकारमा सबैभन्दा कम हुन्छ र त्यसमा न्युनतम सतही ऊर्जा (Surface energy) हुन्छ । त्यसैले न्यूनतम ऊर्जाको अवस्था अर्थात अधिकतम स्थिरता प्राप्त होस भन्ने उद्देश्यले ग्रह तथा ताराहरूले गोलाकार अवस्था ग्रहण गर्छन ।
Categories: अन्तरिक्ष, तारा
के हो विशेष सापेक्षताको सिद्धान्त (Theory of Sepci...
के नुन-पानीले ब्यक्टेरिया मर्छ ?
गाग्रीमा पानी भरिँदै जाँदा आवाज किन परिवर्तन हुदैँ...
किराहरु प्रकाशतर्फ किन आकर्षित हुन्छन् ?
बलिरहेको आगोको पछाडि राखिएका वस्तुहरू किन हल्लिरहे...